उपलब्ध फाँट प्रकाहरू सूची गराउनुहोस्. तपाईँंको कागजातमा फाँट थप गर्नका लागि, फाँट प्रकार क्लिक गर्नुहोस्, फाँट क्लिक गर्नुहोस् चयन सूचीमा, र पछि क्लिक गर्नुहोस् Insert. तलका फाँटहरू उपलब्ध हुन्छन्:
एउटा पाठ फाँट घुसाउछ जस्ले एउटा सूची बाट एउटा वस्तु प्रदर्शन गर्दछ। तपाईँंले सूचीमा वस्तुहरू थप गर्न, सम्पादन गर्न , हटाउन र तिनीहरूको क्रम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँंको कागजात भित्र एउटा आगत सूची फाँट क्लिक गर्नुहोस् वा वस्तु रोज्नुहोस् संवाद प्रदर्शन गर्नलाई Ctrl+Shift+F9 थिच्नुहोस्।
तलका फाँटहरू मात्र घुसाउन मिल्दछ यदि करेस्पोन्डिङ फाँट प्रकार प्रकार सूचीमा चयन गरिन्छ.
चयन गरिएको फाँटका लागि लागू गर्न चाहेको ढाँचा क्लिक गर्नुहोस्, वा क्लिक गर्नुहोस् "Additional formats" अनुकूलन ढाँचा परिभाषित गर्नका लागि.